Brewster, Cape Cod, Massachusetts, United States
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguVivian And Patrick
Ikhaya lethu likwindlela yabucala ephuma kuhola wendlela edolophini. Indawo yethu yabucala eneminyaka emihlanu ubudala ineveranda yomfama omncinci ngaphambili, igumbi lokulala eli-18'x14' kunye negumbi lokuhlambela elikhulu, igumbi labucala le-8'x8' elijonge ngasemva, igumbi eliluncedo le-8'x8', kunye nomnyango wabucala. Umenzi wekofu, ifriji encinci, imicrowave kunye netoaster zibekwe kwigumbi eliluncedo. Umkhondo webhayisekile kunye nemarike yokutya yi-1/4 yeemayile ukusuka endlwini. Iilwandle zoluntu ezinetyuwa namanzi amatsha ziphakathi kweemayile ezi-1.5.
Indlu yethu emahlathini kumthi ofileyo odweliswe isitrato kukuhamba imizuzu emi-3 ukuya kuthutho lwebhasi yasekhaya kwikona yethu, iimayile ezi-1.5 ukuya eCape Cod Bay elunxwemeni, i-1/4 yeemayile ukusuka eCape Cod Bike Trail kunye neevenkile ezirentisa ngeebhayisekile kunye nevenkile encinci yegrosari. , kunye neekhilomitha ezi-3 ukusuka kwi-State Park. Amachibi anamanzi amatsha namachibi akufuphi. Igumbi loncedo elikufutshane linefriji encinci, umenzi wekofu, itoaster kunye nemicrowave.
Igumbi lineebhedi zokwenyani (ukumkanikazi omnye kunye nebhedi yosuku olunye evulelwa oomatrasi ababini abahlukeneyo) umabonakude osicaba kunye neWi-Fi yasimahla, kunye nefeni yesilingi. Umoya ozolileyo kakhulu wakhelwe ngaphakathi ukuba uyathanda.
Kwipropati yethu sinegadi ephilayo apho sisebenza ngokukhethekileyo ekukhuliseni izityalo zetumato kunye nezityalo ezithengiswa kwiFama. Kwakhona sineentlobo ezininzi zeentyatyambo.
Indawo yethu yeendwendwe inokwamkela iindwendwe ezinokuhamba okuphazamisekileyo. Zonke iingcango zibanzi ngakumbi kwaye ishawari ingena kunye nemivalo yokubamba, indlu yangasese yi-ADA evunyiweyo yobude, isinki yokuhlambela ixhonywe eludongeni ukuze kuhlaliswe isitulo esinamavili ngaphantsi. Umgangatho wegumbi lokuhlambela uyithayile yeceramic ekwaziyo ukutyibilika. Nangona kunjalo akukho kufikelela kwirempu.
Zizindlu ezili-9 kwindlela yethu emfutshane enamaplanga anzima enegrabile. Iintsapho ezininzi zinabantwana abancinane.
Umbuki zindwendwe ngu- Vivian And Patrick
We are small growers of heirloom tomato plants and endangered food plants for sale. We also make oil based soaps and other skin products in our home on Cape Cod Massachusetts. We s…
Abanini (abanini) bahlala kwiindawo ezikufutshane kwaye bayafumaneka ixesha elininzi ngoncedo okanye imibuzo.
UVivian And Patrick yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Brewster, Cape Cod